PSJTV | डेंगु भाइरस किन छिटो फैलिन्छ ? जोगिन के गर्ने ?
डेंगु भाइरसका कारण डेंगु रोगको संक्रमण हुन्छ। एडिज नामक लामखुट्टेको टोकाइबाट डेंगु भाइरस एक–अर्कामा सर्छ। डेंगु भाइरस चार प्रकारका हुन्छन् । जसलाई भाइरस १,२,३ र ४ मा विभाजन गरिएको छ । यो डेंगु भाइरस बोकेको लामखुट्टे दिउँसो सक्रिय रहने गर्छ। एडिज लामखुट्टेको टोकाइबाट चिकन गुनिया, जिका आदि संक्रमणसमेत हुने गर्छ।
संक्रमित लामखुट्टेले एकपटकमा कम्तीमा आठजनालाई टोक्छ। जसले गर्दा एकपटक भाइरस देखिएमा त्यो महामारीको रूपमा छिटो फैलिन्छ। यो जानकारी आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सरुवा रोग विशेषज्ञ डा.अनुप बाँस्तोलाले लेखेका छन्।
एकपटक डेंगुबाट प्रभावित भइसकेका व्यक्तिमा पुनः संक्रमण हुने सम्भावना अधिक रहन्छ। डेंगु भएको समयमा जन्मिएका बच्चामा तथा प्रतिरोधी क्षमता उच्च भएका मानिसमा डेंगुले जटिल समस्या निम्त्याउने खतरा हुन्छ । जटिल खालको डेंगु भएमा मानिसको ज्यान पनि जान सक्छ।
एडिज लामखुट्टेको लार्भा विकासका लागि अक्सिजनयुक्त पानी आवश्यक हुन्छ। त्यसैले, प्रायः सफा पानीमा अन्डा पार्ने गर्छ । गमला, जथाभावी फालिएका बट्टा, पानी जमेका खाल्डाखुल्डी र टायर आदिमा जमेको पानीमा समेत यसले अन्डा पार्ने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ, यस्ता ठाउँ सधैँ सफा राख्नुपर्छ। पानी राख्ने भाँडा छोपेर राख्नुपर्छ।